I-Mistover-secluded entabeni cottage - I-Airbnb
I-Mistover-secluded entabeni cottage
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLathika
Indawo evulekileyo evulekileyo evulekileyo enegumbi lokulala eliphezulu, igumbi lokuhlala, indawo eyongezelelweyo enedivan enkulu eyakhelweyo, kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Yonwabela ikofu yakho kwibalcony ngemibono yayo emangalisayo; isidlo sasemini kwibhentshi yepikiniki egadini.
I-Mistover ifanelekile kusapho oluncinci okanye iqela labahlobo. Ukutya akubonelelwanga: le yindawo yokuzimela, ngoko ke ungalungiselela ukutya kwakho/utye out/uthathe into etyiwayo.
Nceda ufunde lonke olu luhlu phambi kokuba ubhukishe.
Indlu engasese epholileyo yasentabeni, nje iikhilomitha ezi-3.5 ukusuka kumbindi wedolophu, ilungele abahambi abafuna intuthuzelo kunye nokuba bucala. Yenzelwe abahambi abafuna ukuziphekela ukutya okanye ukuodola ukutya.
Indawo yokuhlala ezolileyo enemibono emangalisayo kunye nokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Lathika
SITHATHA KUPHELA UKUBHEKA NGOMOYA BNB. Nceda ungazami ukuqhagamshelana nam ngokuthe ngqo - yonke imibuzo inokuthunyelwa ngo-Airbnb.
I-cottage ine-inverter, umatshini wokuhlamba, ifriji kunye nokubonelela okwaneleyo kwelinen. Ikhitshi liya kuba neseti yokuqala yezinto ezisisiseko, eziluncedo (iti, ikofu, iswekile, ubisi, njl.njl) ukufika kwakho.
I-cottage ine-inverter, umatshini wokuhlamb…